﻿ दशैंमा इटहरीवासीलाई कसले दियो धुलो उपहार ?(भिडियोसहित)
दशैंमा इटहरीवासीलाई कसले दियो धुलो उपहार ?(भिडियोसहित)
बिहीबार १६, असोज २०७६
इटहरी । यतिखेर इटहरी चोक धुलहरीमा परिणत भएको छ । हजारौं मानिसहरु हिड्ने र गाडीहरु गुड्ने महेन्द्र तथा कोशी राजमार्गमा परेका खाल्डा पुर्नको लागि प्रयोग गरिएको गिटी, बालुवाका कारण धुलैधुलो भएको हो ।
खाल्डै खाल्डा परेको राजमार्ग मर्मत गर्न सम्बन्धित पक्षले बेलैमा चासो नदिँदा समस्या निम्तिएको हो । वैशाख–जेठ देखि नै सडक भत्केर खाल्डै खाल्डा परेपनि मर्मत गर्न चासो दिइएको थिएन । भैसी नै आहाल बस्ने गरी खाडल परेपछि भने गिटी बालुवा हालिएको छ ।
यतिखेर कोशी राजमार्ग ६ लेन सडक आयोजनाको जिम्मामा छ । सडक बेलैमा बनाउन नसकेको आयोजनाले मर्मतमा समेत चासो नदिएको हो । महेन्द्र राजमार्ग भने सडक विभागको जिम्मामा छ । तुलनात्मक रुपमा यतिखेर कोशी राजमार्ग बढी भत्किएको छ ।
सडक भत्केर ठूला ठूला खाल्डा परिसक्दा पनि मर्मतमा चासो नदिएको भन्दै ६ लेन सडक परियोजनाप्रति सर्वसाधारणले आक्रोश पोखेका छन् । यस्तै इटहरी उपमहानगरप्रति पनि सर्वसाधारणले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । तर मुख्य सडक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । राजमार्गमा मर्मत गर्नै नपाइने हुँदा सहन बाध्य भएको तर सडक मर्मतको लागि पहल गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
इटहरीमा धुलो यो छोटो भिडियोमाः
आरोपित कर्मचारीले राजिनामा दिए, एसओएसले भन्यो, ‘युवतीको साहसको प्रसंसा गर्छौं’
ओखलढुंगाबाट जबरजस्ती करणी उद्योगका फरार प्रतिवादी पक्राउ
झापामा जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
विश्वकै तेस्रो खर्बपति बने मार्क जुकरबर्ग
खोटाङ, धनकुटालगायतका सात जिल्ला कोरोना मुक्त